Soccer Manager 2021 dia simulator tena mpilalao baolina kitra | Androidsis
Soccer Manager 2021 dia simulator baolina kitra vaovao fa manohy amin'ny saga azy manokana izy ary tonga feno statistika handray fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny maha-mpanazatra antsika mandinika ny fivoaran'ny lalao.
Un simulator izay hahafahantsika mahita ny lalao raha mahita ny latabatra antontan'isa momba ny mpilalao sy ny lalao izahay, ary mandinika ireo lalao manan-danja indrindra, ary afaka manapaka ny lalao izany. Andao ataontsika amin'ny simulator baolina kitra mahery vaika amin'ny Espaniola.
1 Tantano ny klioba faharoa hitondra azy ho voalohany
2 Manamboara ny kianja tsara indrindra sy ny toerana tsara indrindra ao Soccer Manager 2021
3 Dia tsara ho simulator sy fitantanana ekipa
Tantano ny klioba faharoa hitondra azy ho voalohany
Io Soccer Manager 2021 io dia misy klioba 800 avy amin'ny firenena 33 Hamela antsika hitety ny tontolon'ny baolina kitra hihaona amin'ireo kintana amin'ny ho avy na hamela antsika hanana fahafaha-mandray ekipa hatramin'ny faharoa ka hatramin'ny voalohany. Ary maninona ary, ataovy izay handreseny ny ligy na ny tompon-daka.
Toy ny nataony ihany Maradona miaraka amin'i Napolés izay nitarika azy hanjary tsy ho mpilalao raha ekipa faharoa, eto dia azontsika atao tsara ny mankafy ny tontolon'ny baolina kitra amin'ny fomba fijerin'ireo izay mitantana sy mampiofana ny ekipa.
Izany hoe afaka isika mijery ny tsena famindrana, mivarotra mpilalao, mampiofana azy ireo na mampiasa scouts hanao ny asa ho antsika ka hahita ny Messi manaraka.
Manamboara ny kianja tsara indrindra sy ny toerana tsara indrindra ao Soccer Manager 2021
Soccer Manager 2021 dia mitondra antsika amin'ny simulator iray manontolo izay tsy ampy amin'ny antsipiriany toy ny fahaizana manatsara ny kianja na koa ireo fotodrafitrasa hampiofana ny ekipanay. Eto isika dia miatrika lalao iray tena feno ary izay ho an'ireo tia ny lalao tsara tarehy, dia ho voasaron'ny fanantenany rehetra.
La ny fividianana sy ny fitantanana ny ekipa dia mitondra antsika amin'ny lalao sasany izay andraisantsika ny andraikitry ny mpanazatra afaka mijanona kely aza ny fotoana ka manapa-kevitra tsara kokoa raha hanao fanovana na hampiasa tetika hafa handravana ilay rindrina fiarovan-tena aroson'ny ekipa mpanohitra.
Hiroso amin'ny lalao amin'ny lalao isika rehefa misy fotoana mahaliana azo ovaina ho tanjona, fanovana mpilalao na tamin'ny andrana farany nataon'ny ekipa mpitsidika manandrana mamatotra ny lalao. Eto dia mila realisme be dia be ny fampivoarana ny hozatrao rehefa mahita ny mpilalao manafika sy miaro isika.
Dia tsara ho simulator sy fitantanana ekipa
Ananantsika izany sary 3D nanahaka tanteraka tamin'ny dribbling, fitifirana, foul na zoro, manome azy ny teboka manokana hahatonga azy io ho simulator tena tsara izay miasa tsara hatramin'ny fotoana voalohany nilalao. Izy io dia tsy ampy amin'ireo efijery rehetra misy statistika ary ahafahantsika manao tombana amin'ny fanapahan-kevitra horaisintsika.
hita maso manana ny heviny ary na dia ao amin'ny simulate aza indraindray ny mpilalao «skate» Ao amin'ny hetsika, tena misy ny zava-misy ary manome izany fahatsapana rehetra izany mankany amin'ny kianja eo an-toerana mba hanandrana hanongotra tanjona hahazoana fandresena. Amin'ny Espaniôla izy io, ary manana angon-drakitra lehibe hahafahana mankafy ny Ligy, ny Premier ary andiany tompon-daka hafa izay mitondra antsika any Eropa, Amerika na Azia.
Soccer Manager 2021 dia simulator baolina kitra tena tsara Amin'izay hankafizanao ny mitarika ekipa kely handresy zavatra, na hisintona ny laharana voalohany toa ny Real Madrid na Barcelona, ​​mba hiezaka ny handrombaka ny amboara Tompondakan'ny ligy sy ny tompon-daka lehibe hafa. Torohevitra avo lenta ho an'ny karazana mpampiasa rehetra ary bebe kokoa ho an'ny mpankafy ary araraoty amin'ny tanjona hafa i Alavés na Alcorcón.
Nohavaozina sy ny tsara indrindra amin'ny saga hitarika antsika amin'ny simulation feno amin'ny maha-mpanazatra sy mpitantana ekipa soccer.
Databatra lehibe an'ny mpilalao, ekipa ary ligy
Tiako ny mijery ny lalao tsara indrindra amin'ny lalao sy ny zavatra hitranga
Ny karazana statistika sy data rehetra
Milalao skate ny mpilalao rehefa mihetsika indraindray
Soccer Manager 2021 - Lalao fitantanana soccer
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mitantana klioba 800 avy amin'ny firenena 33 ao amin'ny soccer soccer simulator soccer 2021
[VIDEO] Ny vaovao rehetra an'ny One UI 2.5 ao amin'ny Galaxy Note 10+